ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ ကချင်ပြည်နယ်လူထုနဲ့ တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင်တဲ့ အမျိုးသား လွှတ်တော် နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ ဒုတိယ ဝန်ကြီးတွေဟာ ကချင်ပြည်နယ်ကို ဒီကနေ့ ရောက်ရှိ လာပြီး ပူတာအိုခရိုင်နဲ့ မြစ်ကြီးနားခရိုင်အတွင်း က ဒေသခံပြည်သူတွေ၊ စစ်ဘေးရှောင် ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွေကို သွားရောက်ပြီး ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ လေ့လာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေမန်း က မြစ်ကြီးနားမြို့ မြို့တော်ခန်းမမှာ ပြည်သူလူထုနဲ့ တွေ့ဆုံမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့စဉ်
Photo: RFA/Kyaw Myo Min
နေ့လည်ပိုင်းမှာတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းဟာ မြစ်ကြီးနား မြို့တော်ခန်းမမှာ ဒေသခံပြည်သူတွေ၊ ဋ္ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံချိန်မှာ ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကနေ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကို တည်ဆောက်နိုင်မယ့် အလားအလာကောင်းတွေရှိနေပြီလို့ ပြောပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ လိုက်ပါလာတဲ့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုဝန်ကြီးနဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ စုပေါင်းပြီး စစ်ဘေးရှောင် ဒေသခံပြည်သူတွေကို စုပေါင်းအလှုငွေ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ အဖွဲ့ဟာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ပူတာအိုမြို့က ဒေသခံတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ နေ့လည်ပိုင်းမှာ မြစ်ကြီးနားမြို့၊ မြို့သစ်ကြီးရပ်ကွက် မှာရှိတဲ့ ဂျန်မိုင်ကောင် စစ်ဘေးရှောင်စခန်းက ပြည်သူတွေကို သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့အပြင် မြို့တော်ခန်းမမှာလည်း လူထုနဲ့ တွေ့ဆုံလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။
ထိထိမိမိဆွေးနွေးကြဖို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥက္ကဌ တိုက်တွန်း
ကချင်ပြည်နယ်က သိမ်းဆည်း ယာဉ်တွေ လေလံတင်မယ်
မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ် ရောင်းချ သူတွေကို အရေးယူနိုင်ဖို့ အရေး ကြီး
ကိုယ်စားလှယ်တွေ အခွင့်ရေးမဆုံးရှုံးဟု လွှတ်တော်ရုံးပြောကြား
တနိုင်းမြို့နယ် လေပြင်းတိုက် လူ ၃ဝဝ အိုးအိမ်မဲ့
ယုဇနကုမ္ပဏီနဲ့ ဒေသခံတွေ ညှိနှိုင်းမရသေး
ဝန်ကြီးများ စစ်ဆေးချိန်မို့ ကုမ္ပဏီ များ အလုပ်ရပ်နား
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ ထောက်ခံကြိုဆို ပွဲ မြစ်ကြီးနားမှာ ကျင်းပ
Kachin Alliance အဖွဲ့ ရုံးခန်း ဝါရှင်တန်-ဒီစီမြို့တော်မှာ ဖွင့်လှစ်
ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကို WFP ငွေကြေးပြောင်း လဲထောက်ပံ့
နေရပ်- BROTHERES & SISTERS??????
Words only can not get the job done. Over six decades now, We have been suffering Extreme hardships,loss of lives & properties and backwardness under your successive governments. You call us brothers but you are stabbing us from behind. you have made us trapped between you and your swe myo pauk hpaw. Your credibility is now dead & burried. Hope when you say it you mean it.
Feb 10, 2013 09:38 AM
Do not entirely believe ex-military personals. They are still under control of Bo Than Shwe and Bo Maung Aye.
Feb 10, 2013 09:25 AM
ဖမ်းမိထားတဲ့ တပ်မတော်သား ၃ ဦးကို ကေအိုင်အေ ပြန်လွှတ်
Cobra Gold ၂၉-နိုင်ငံ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ပွဲ မြန်မာ မတက်ရောက်
မိုင်ဒါကွင်းမှာ ဆန့်ကျင်ရှုတ်ချပွဲလုပ်ဖို့ ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ကိစ္စ လွှတ်တော်မှာမေးမည်
KIA တပ်အချို့ဖယ်ရှားဖို့ တပ်မတော်ဆွေးနွေး
ဝ လူမျိုးတွေ ပုံမှန်သွားလာခွင့်မရတဲ့ အခြေအနေ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် ညှိနှိုင်းနေ
မြဝတီမင်းကြီး ကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ကို သီတဂူတပည့်တွေ ကန့်ကွက်စာထုတ်
ရေမဆေးသမားတွေအတွက် လုပ်ကွက်တွေ ချထားပေးမည်
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကာလမှာ မီးမပျက်အောင် ဆောင်ရွက်မည်
ရခိုင်အရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ နိုင်ငံတကာကို ရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ် တိုက်တွန်း